Ukungeniswa kwemathiriyeli yamazinyo yeYUCERA
Ifumaneka kwindawo ekhethekileyo yase-Shenzhen, i-Shenzhen Yurucheng / YUCERA Dental Material Co, i-LTD lishishini elibanzi elijolise ekuphuhliseni, ukuthengisa kunye nentengiso ye-Dental Zirconia Ceramic Block. Njengengcali yamazinyo iZirconia Block Abavelisi, Yurucheng Cherish imigaqo ...
Uhambo olutsha lokudibana kwemizi-mveliso, ukuxhawula izandla kunye nokuqamba isahluko esitsha
I-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co, Ltd., eseke iindawo eziphakamileyo ngalo lonke ixesha, ingenise umzuzu obalulekileyo wembali. Nge-Epreli 12, 2021, i-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. kunye ne-Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co, Ltd. ngokusesikweni sayina iqhinga ...
Njengoko sonke sisazi ukuba kukho iintlobo ezintathu zezinto ezisetyenziselwa ukubuyiselwa kwamazinyo: i-zirconia block block kunye nezinto zentsimbi. I-Zirconium oxide yenzeka njenge-monoclinic, tetragonal kunye neefom zeekristal. Amacandelo acocekileyo anokuveliswa njengama-cubic kunye / okanye iifom ze-crystal tetragonal. Ukuze ...
Izinto zamazinyo eziVimba iZirconia
Ayizizo zonke iifowuni ze-zirconia powders ezifanayo. Umahluko phakathi kweemveliso kubungakanani beenkozo kunye nezongezo zilawula kakhulu amandla ebhloko ye-zirconia, uzinzo lwexesha elide, kunye nokuguquguquka. 1. Ngapha koko, iinkqubo ezahlukeneyo ezenziwa ngamazinyo ...